गर्भवती हुदा महिलाले कस्ता खानेकुराहरु खानुपर्दछ ? जानिराखाैँ - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / गर्भवती हुदा महिलाले कस्ता खानेकुराहरु खानुपर्दछ ? जानिराखाैँ
गर्भवती हुदा महिलाले कस्ता खानेकुराहरु खानुपर्दछ ? जानिराखाैँ
मङ्गलबार, बैशाख १०, २०७६
गर्भवती अवस्थाका सबै महिलालाई सेवा र हेरचाह आवश्यक पर्छ । यस्तो सेवालाई प्रायशः गर्भवती वा पूर्वप्रसूति सेवा भन्ने गरिन्छ । गर्भवती सेवाले गर्भवती महिलालाई स्वस्थ रहन तथा सुत्केरी हुँदाका समस्या कम गर्न सहयोग पुयाउँछ । महिला आफै, उनका परिवार तथा समुदायले गर्भवती सेवा दिनमा मद्दत पुयाउँछन् । साथसाथै गर्भवती महिलाको हेरचाह गर्न जानेका मातृशिशु स्वास्थ्य सहयोगीले सेवा प्रदान गर्न सक्छन् ।
मातृशिशु स्वास्थ्य सहयोगीले गर्भवती अवस्थामा मात्र होइन, प्रसूति व्यथा लाग्दा वा सुत्केरी भएपछि पनि सेवा दिने गर्छन् ।
गाउँघरमा धेरैजसो महिलाको सामान्य प्रसव हुने गर्छ । यसकारण गाउँघरमा गर्भवती सेवामा त्यति ध्यान दिँदैनन्, सोच्ने गर्दैनन् तर कतिपय अवस्थामा महिलालाई राम्रोसँग जाँच गर्न, आवश्यक पर्ने सुई दिन र सुरक्षित रूपमा सुत्केरी गराउन स्वास्थकर्मीको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
गर्भवती महिलाहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
-राति आठ घन्टा र दिनमा दुई घन्टा अनिवार्य सुतेर आराम गर्ने
-गर्भवती महिलाले मनमा सकारात्मक कुराहरू मात्र सोच्ने, नकारात्मक कुरा सोच्दा ब्लडप्रेसर बढ्नेलगायत मानसिक समस्या सिर्जना हुन सक्छ
-धुम्रपान, मद्यपान सेवन नगर्ने
-चिकित्सकको सल्लाह नलिईकन कुनै पनि औषधि नखाने
-शारीरिक तथा मानसिक कडा पर्ने खालको परिश्रम नगर्ने, कडा परिश्रम गर्दा समय नपुगी बच्चा जन्मने र बच्चा तथा आमाको स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्छ
-बिहान उठ्नेबित्तिकै व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने, अन्य समयभन्दा यो समयमा सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्छ
-पोषिलो खानेकुरा खाने
-अन्य समयभन्दा बढी झोलयुक्त खानेकुरा खाने
-नियमित सेवन गर्ने औषधि आइरन, क्याल्सियम खाने
यस्ता छन् गर्भवती महिलाले खानैपर्ने खानेकुराहरु :
१. होल ग्रेन
होल ग्रेनमा फाइबर र पोषक तत्व उच्च मात्रामा हुन्छ । यसमा एन्टीअक्सिडेन्ट, मिनरल सेलेनियम हुन्छ भने यसमा पाइने फाइटोन्युट्रियन्ट्सले शरीरका कोषलाई रक्षा गर्छ ।
ओखर ओमेगा थ्रि एसको राम्रो स्रोत हो । यसमा प्रोटीन र फाइबर पनि पाइन्छ । बिहानै स्न्याक्सका रुपमा या सलादका रुपमा ओखर खान सकिन्छ ।
दहीमा प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स र क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो । क्याल्सियमले हड्डी मजबूत पार्नुका साथै शिशुको स्वस्थ हड्डीको विकास गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।
४. गाढा हरियो सागसब्जी
पालुंगोजस्ता सागसब्जी पनि गर्भवतीका सुपरफुड मानिन्छन् । यिनीहरु भिटामिन र पोषकतत्वले भरिपूर्ण हुन्छन् । खासगरी हरियो सागसब्जीमा भिटामिन ए, सी र केका साथै फोलिक एसिड पाइन्छ ।
५. बोसोरहित मासु
बोसोरहित मासु उच्च प्रोटिनको मुख्य स्रोत हो । बोसो नभएका मासुमा स्पाइनल कर्ड मजबूत बनाउन उपयोगी मानिने कोलिन पाइन्छ ।
तर, राम्ररी नपाकेको या आधा पाकेको मासुबाट भने टाढै रहनुपर्छ, त्यस्तो मासुमा ब्याक्टेरिया र परजीवी हुने सम्भावना हुन्छ । जुन गर्भमा बढिरहको शिशुका लागि खतरनाक हुन सक्छ ।
६. विभिन्न रंगका फलफूल तथा तरकारी
हरियो, रातो, सुन्तला, पहेंलो तथा बैजनी रंगका फलफूल सेवनले शिशुले विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त गर्छ । हरेक रंगको फलफूलमा अलग खालको भिटामिन र खनिज तत्व पाइन्छ
अण्डा प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । प्रोटिनले कोषहरु निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले गर्भवस्थामा अण्डा खानु राम्रो हुन्छ । यसमा कोलिनलगायतका दर्जनौं भिटामिन र खनिज तत्वहरु पाइन्छ ।
कोलिनले बच्चाको दिमाग र स्पाइनल कर्ड राम्ररी विकास गर्न सघाउ पु-याउँछ । यसका साथै यसले न्युरल ट्युबका समस्या पनि हुन दिँदैंन ।
गर्भको शिशुको स्वस्थ विकासका लागि ओमेगा ३ फ्याटी एसिड महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले आमाको मूड पनि सकारात्मक बनाउँछ । सामुद्रिक खानामा कम मक्र्युरी हुने भएकाले हरेक साता खाने सल्लाह दिइन्छ ।
गेडागुडी पनि प्रोटिनसहित आइरन, फोलिक एसिड, पोटासियम, म्याग्नेसियम र आवश्यक फ्याटी एसिडको राम्रो स्रोत हो ।
यिनै तत्वहरु गर्भावस्थामा चाहिन्छ । यसका साथै यो फाइबरको राम्रो स्रोत भएकाले गर्भावस्थामा निम्तने साझा समस्या कब्जियत र हेमोरोइड्सबाट पनि रोकथाम गर्छ ।
सखरखण्डले क्यारोटेनोइड्स तत्वबाट सुन्तला रंग प्राप्त गर्छ, यो शरीरमा भिटामिन एमा परिवर्तन हुन्छ । यो भिटामिन सी, फोलिक एसिड र फाइबरको मुख्य स्रोत हो ।
गर्भवती महिलाले खान नहुने कुराहरु
अल्कोहलले पनि भर्खर विकास हुँदैं गरेका शिशुको दिमागलगायतका अंगलाई क्षति पु¥याउँछन् । यसले गर्दा पछि बच्चा मानसिक रुपमा अपांग भएर जन्मने सम्भावना हुन्छ ।
२. नपखालिएका तरकारी
राम्ररी नपखालिएका तरकारीमा टोक्सोप्लाज्मा नामक परजीवी हुन्छन् । यसका कारण टोक्सोप्लाज्मोसिस हुने भएकाले यो शिशुका लागि हानिकारक हुन्छ । त्यसैले तरकारीलाई साबुनपानीले होइन, ब्रसले पानीमा पखाल्नुपर्छ ।
यस्तै, ब्याक्टेरिया हुन सक्ने भएकाले तरकारीको फेद र टुप्पो पनि काट्नुपर्छ ।
३. पास्चराइज नगरिएको दूध
पास्चराइज नगरिएको दूध सेवन शिशुका लागि हानिकारक हुन सक्छ । त्यसैले पास्चराइज गरिएको दूधमात्र पिउनुस् ।
यो शिशुको स्नायु प्रणाली विकासका लागि खतरनाक मानिन्छ । मर्क्युरी बढी पाइने माछाहरु स्वर्डफिस, सार्क, टाइलफिस सेवन गर्नुहुन्न । टुना, साल्मन, क्याटफिस, पोलोक माछामा भने कम मक्र्युरी हुन्छन् ।
५. काँचो माछा
नपकाएका मासु स् माछा कम्तीमा पनि १४५ डिग्रीको तापक्रममा पकाएको हुनुपर्छ । राम्ररी नपकाएका मासु र कुखुरा पनि खानुहुन्न ।
गर्भवती महिलाले दैनिक २ सय मिलिग्रामभन्दा बढी क्याफिन खानुहुन्न । एक कप कफीमा ९५ एमजि क्याफिन हुन्छ भने एक कप चियामा ४७ एमजि क्याफिनको मात्रा हुन्छ ।
गर्भवती भएको पहिलो महिना कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ ?
गर्भधारण गरेको प्रारम्भिक तीन महिना एकदमै सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसबेला चक्कर लाग्नु, थकान महसुष हुनु स्वभाविक हो । सामन्य अवस्था भन्दा केहि गाह्रो हुन सक्छ ।
खासगरी यस अवधीमा आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि खानपानमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
यस अवस्थामा फलको सेवन गर्नुपर्छ । तर, भूँइकटहर, मेवाबाट बच्नुपर्छ । फलफूलमा भिटामिन भरपुर हुन्छ, जसले शरीरमा उर्जा र शक्ति प्राप्त हुन्छ । सुरुवाती अवस्थामा आउनसक्ने कमजोरीबाट यसले बचचाउँछ ।
२. दुधजन्य उत्पादन
ग्र्भावस्थाको पहिलो महिना दुध वा दुधजन्य पदार्थको सेवन गर्नुपर्छ । दही, चिज, पनिरको सेवन पनि लाभदायक हुन्छ । यसबाट तपाईको शरीरमा आवश्यक पोषक तत्व मिल्छ । गर्भवती महिलाले दिनमा एक लिटर दुध पिउनु राम्रो हो ।
३ . फलामयुक्त खानेकुरा
गर्भावस्थामा फलामयुक्त खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ । जब शरीरमा फलामको मात्रा पर्याप्त हुन्छ, रक्तसंचार राम्ररी हुन्छ ।
त्यसैले गर्भवतीको पहिलो चरणमा फलामयुक्त खानेकुराको आवश्यक्ता हुन्छ, जसले तपाई र गर्भको बच्चामा रक्त संचार र शुद्धि होस् । यसका लागि चुकन्दर, ड्राइ फुड्स, पालक आदिको सेवन गर्नुपर्छ ।
४. फोलेटले भरपुर आहार
गर्भवती भएपछि चिकित्सककहाँ सम्पर्क राखिन्छ । चिकित्सकको सुभाव हुन्छ कि, तपाईले फलिक एसिडयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो सहि कुरा हो, यस्तो खानेकुराले तपाईको गर्भमा रहेको भ्रुणको विकास राम्ररी हुन पाउँछ ।
यदि तपाईले फलिक एसिडयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नु भएन भने बच्चाको मस्तिष्कको बिकास हुन पाउँदैन । कतिपय अवस्थमा उनीहरु अपाङ्ग जन्मन सक्छ ।
५. भिटामिन बि-६
गर्भअवस्थाको सुरुवाती दिनमा भिटामिन बि- ६ सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्न, माछा, बदाम आदिमा भिटामिन बि-६ पाइन्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो स्रोत केरा हो ।
गर्भवती महिलाले अण्डा खाँदा हुने फाइदाहरु
गर्भवती महिलालाई दिनमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दुइ सय देखि तीन सय सम्म थप क्यालोरी आवश्यकता पर्दछ । यो क्यालोरी आमा र गर्भको बच्चा दुबैको लागि आवश्यक हुन्छ । एउटा अण्डामा ७० क्यालोरी बराबरको इनर्जी हुन्छ । त्यसैले अण्डाको सेवनले गर्भवतीलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको ठूलो हिस्सा आपूर्ति गर्न सक्छ ।
तर झाडापखाला, वान्ता, फुड प्वाइजनिंग भएको बेलामा भने अण्डा खानु हुँदैन । त्यसको साथै पाचन क्रिया कमजोर भएका महिलाले पनि डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्रै अण्डाको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अण्डामा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ जो गर्भावस्थामा अध्यधिक आवश्यक हुन्छ । गर्भमा रहेको बच्चाका हरेक कोशिकाहरु प्रोटिनले नै बनेका हुन्छन् । गर्भवती महिलाले पर्याप्त अण्डा खानाले भु्रणको राम्रोसँग विकाश हुन पाउँछ ।
अण्डामा सबै १२ थरी भिटामिनका साथै विभिन्न खाले लवण पनि पाइन्छ । अण्डामा पाइने कोलिन तथा ओमेगा थ्री फ्याट्टी एसिडले गर्भको बच्चाको समग्र विकाशलाई बढावा दिन्छ । यसको सेवनले बच्चामा मानसिक समस्या हुने जोखिम कम हुनुका साथै मस्तिष्कको भरपूर विकाश हुन्छ ।
जन्मने बच्चाको दाँत स्वस्थ राख्नको लागि गर्भवती हुँदा यी चिज खानुहाेस्
तल उल्लेखित खानाको सेवनले बच्चाको दाँतको विकासमा र दाँत स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछन्
१. भिटामिन सी सेवन
गर्भवती महिलाले भिटामिन सि सेवन गरेमा बच्चाहरुको दाँत बलियो हुन मद्दत गर्छ। स्रोतहरु ब्रोकाउली, गोलभेँडा, स्ट्रबेरि आदिहुन्।
२. प्रोटीनको सेवन
प्रोटीन हाम्रो शरीरको लागि प्रसस्त मात्रामा चाहिन्छ। बच्चाको दाँत बनाउन यसले ठुलो भुमिका खेल्दछ।यसको सहायताले क्यालसियम र फसफोरसले दाँतको इनामेल बनाउँछ त्यसैले गर्भवति आमाले प्रोटीनको सेवन गर्न जरुरीछ।यसका स्रोतहरु माछा, मासु र डेरीका पदार्थहरु हुन् ।
३. भिटामिन डी सेवन
भिटामिन डी ले क्यालसियम र फसफरसलाई सोस्न र शरिरमा रहिरहन मदत गर्दछ, जुन तत्वहरु दाँत बन्नको लागि अति आवश्यक हुन्छन् । स्रोतहरु माछा, कलेजो, अण्डा, च्याउ, चिज, दुध आदि हुन् ।
४. जोखिमपुर्ण बानीहरु त्याग्ने
धुम्रपान र मध्यपान त्याग्ने।साना बालबालिकाहरु धुम्रपान गर्ने आमाको नाजिक रहेमा असरबढि हुने र शिशुहरुलाइ खोकिलाग्ने, निमोनिया,दम र छातीका समस्याहरु आउन सक्छन् ।
धुम्रपान र मध्यपानको सठ्ठा पौस्टिक आहारको सेवन गर्नाले दाँत मात्र नभएर सम्पुर्ण स्वास्थ्य स्वस्थ रहन्छ।
५. क्यालसियम र फसफोरसको सेवन
शिशु गर्भमा रहेको चौथो महिनामा दाँत र हाडको विकासको लागि क्यालसियम र फसफोरसको आवश्यकता पर्छ र यो आमाले खाएको खानाबाट प्राप्त हुने भएकाले गर्भवती महिलाले खानामा यी खनिज पद्दार्थको सेवन गर्नु आवश्यक मानिन्छ।
दुध र दुधबाट बनेका खाद्यपदार्थ जस्तै चिज, दहि, हरियोसागपात र गेडागुडी क्यालसियम र फसफोरसका स्रोत हुन्।
६. फोलिक एसिडको सेवन
फोलिक एसिड एक भिटामिन हो जसको कमीले शिशुहरुमा ओठ र तालुखुँडे हुने समस्या आउँन सक्छ।त्यसैले गर्भावस्थामा हरियो सागपात, दाल, ब्रोकाउली गोलभेँडा सेवन गर्नाले यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
७. भिटामिन ए सेवन
यसले बच्चामा दाँतको विकास मा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले गर्भवती महिलाले भिटामिन ए को सेवन गर्नु आवश्यक मानिन्छ। यसका स्रोतहरु गाजर, अन्डा, दुध, कलेजो, पाकेको फर्सि र पहेँलो फलफुल हुन् ।
भान्छामा प्लास्टिकको पन्यूँले बिगार्छ कलेजो
जाडोमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने ?
डार्क सर्कल हटाउने सजिलो तरिका
घरमै बसेर घटाउनुस् तौल
२.जनैपूर्णिमाको दिन खाने क्वाँटीको यतिधेरै छन् फाइदा - थाहापाईराखौ
३.'फर्सीको जरा '- नेपाली साहित्यको एउटा सशक्त कविता !
४.आवश्यक भन्दा धेरै पानी पिउदाका बेफाईदाहरु यस्ता छन्
५.घमण्डी मान्छे र उम्लेको दुध उस्तै हो, सम्हाल्न नसके दुवैको अस्तित्व पतन हुन्छ - ( भिडियोसहित )
६.के तपाईं पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् स्मरण शक्ति बढाउने तरिका